UDI-da oo lagu eedaynayo gacan culays ku aadan kasoo jawaabista codsiyada dadka qoys ahaan loogu dacwooday - NorSom News
UDI-da oo lagu eedaynayo gacan culays ku aadan kasoo jawaabista codsiyada dadka qoys ahaan loogu dacwooday
Madaxa xafiiska baarlamaanka Norwey u qaabilsan ilaalinta iyo dabagalka in aan xafiisyada dowlada lagu dulmin dadka caadiga(Sivilombudsmannen) ayaa eedeyn balaaran usoo jeediyay laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Norwey ee UDI-da. Isaga oo sheegay inuu ka wel-welsanyahay waqtiga dheer oo ay UDI-du qaadato si ay ugu soo jawaabaan codsiyada dadka qoysaskoodu u dacwoodeen. Wuxuuna intaas ku daray in waqtigaas dheer ee uu qofka sugayo ay dhibaato nololeed soo gaari karto. dad gaaraya 9600 ayaa wali jawaab ka sugayo UDI-da, waxayna dadka isugu jiraan kuwo qoxootinimo mar dhow ku yimid, kuwa sharci ku leh wadanka iyo waliba dad u dhashay wadanka oo wadamo kale kasoo guursaday. Hadii uu qof soomaali ah ama Ereteriyaan ah uu u dacwoodo qof familkiisa ah, waxay qaadataa 20 bilood in uu helo jawaab. Sivilombudsmannen ayaa horey hoosta uga xariiqay in xiliga macquulka ee la aqbali karo in qofka loogu soo jawaabo ay tahay 12 ilaa 13 bilood. Inay UDI-du aysan dadka qaarkiis usoo jawaabin sadex sano ka badana ay tahay wax aan la aqbali karin.
Eedeyntan ayaa kusoo aadayso iyada oo dadka kasoo dacwoonaya shaqada UDI-da ay laba jibaarbeen hal sano gudaheed. Cida ay masuuliyada ka saarantahay inay UDI-da siiyaan xoog iyo shaqaale ku filan si ay howshan si hufan ugu xaliyaana waa wasaarada cadaalada iyo amniga. Marar badan ayaan loo cadeeyay inay qarash iyo awood ku filan ay siiyaan UDI-da si ay codsiyada dadka xili macquul ah ugu soo jawaabaan. Wasaarada oo ka jawaabayso eedaas loo jeediyay ayaa sheegtay in tirada dadka u dacwoonaya qof qoyskooda ah ay wax badan kor u kacday, kadib markii sanadkii lasoo dhaafay ay Norwey magangalyo waydiisteen dad kor u dhaafaya 30 000. Waxay sheegtay inay marka hore ay tahay in laga shaqeeyo ka jawaabistaa codsiyada dadka isa soo dhiibay sanadkii hore, iyaga oo intaas ku daray inay filayaan in tirada dadka codsanayo inay in qof famili ah loo keeno ay u dhici doonto sanadkan. Lacag dheeri ahna ay siiyeen UDI-da si ay u xaliyaan arintaas.
UDI-da oo ayagana dhankooda ka jawaabaya eedeyntaas loo soo jeediyay ayaa sheegtay in ay hal sano gudihiis ay kasoo jawaabeen codsiyada 3400 oo qof, iyaga oo wax badan ka badalay xaalada sanadkii lasoo dhaafay ee 2015. Waxayna intaas ku dareen inay rajeynayaan in xiliga ay qaadato in qof loosoo jawaabo ay hoos u dhici doonto sanadkan gudihiisa. Si gaar ah waxay u sheegeen in xiliga jawaabta ee dadka aan u baahneen in macluumaad dheeri ah laga helo, ama dhiig iyo waraysi aan loo dirin uu ka yaraan doono intii hore.
Previous articleSweden oo raacday wadadii Norwey iyo Denmark, isbadal weyna ku samaysay sharciga qoxootiga wadankaas
Next articleBoolisku waa mahadsanyihiin, balse wali ma qanacsani ilaa dadka kale la igala mid dhigo